smartphone Best 2019 - Rule News
iPhone, Huawei, Samsung oo OnePlus marka la barbar dhigo oo kaalinta
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “smartphone Best 2019: iPhone, Huawei, Samsung oo OnePlus marka la barbar dhigo oo kaalinta” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo, theguardian.com on Monday 10-kii June 2019 05.47 UTC
Ma u baahan tahay smartphone cusub, laakiin aanad garanayn kaas oo ka mid ah waa mid aad u fiican? Halkan Hanuuniye barbar ee casriga ah top-dhamaadka hadda ka Apple, Samsung, Huawei, OnePlus iyo kuwa kale si ay u caawini kartaa in aad soo qaado badayo idiin khayr.
Waxaa weligii waqti fiican si ay u iibsadaan smartphone a flagship cusub ee gmail tayo badan oo la heli karo ee kala duwan ee qiimaha badan sidii hore. Haddii aad mudnaan waa nolosha batteriga laba maalmood, waxqabadka camera fantastic ama shaashad cajiib ah, waxaa jira fara badan oo la kala dooranayo.
Hagahan waxaa iibsadaha ee Guardian in casriga ah top-dhamaadka ahaa ee la soo dhaafay updated on 10 June 2019, oo wakiil ka ah tusaalayaasha ugu wanaagsan ee la heli karo waqti. Sida lagu daydo cusub lagu sii daayo iyo tijaabiyey, buugan la cusbooneysiin doonaa si ay gargaar aad doorato telefoonka flagship kugu habboon.
Ku soo dhawow mid ka mid ah Hanuuniyaa iibsadaha cusub ee Guardian ee. Maqaalkani waxa uu ka dhigan yahay boqolaal saacadood oo jirrabaya by qoraaga in uu isu keeno liiska Ogolow in alaabta ama adeegyada si aad u qaadan kartaa ugu fiican oo iska indha intiisa kale talinayaa oo aan haysan in la sameeyo saacadood oo aad cilmi u gaar ah.
Iyadoo Guardian ku kasban laga yaabaa in komishanka yar oo ka alaabta soo iibsaday dhex links affiliate, waxyaabaha saftay guide iibsadaha ee lagu baaro oo ka mid ah iyada oo aan saamayn ku soo jeeda xayeysiistahan kasta ama hindisaha ganacsi.
Best guud: OnePlus 7 Pro
kombaniga: £ 649 / $669
OnePlus The 7 Pro leedahay weyn a, screen qurux badan, waa telefoonka ugu dhaqsiyaha-dareen by miles oo uu leeyahay tartan-garaaca in-bandhigay scanner faraha a.
Sawir: Samuel Gibbs / The Guardian-ka
Kuwani heshiis joogto ah updated ayaa la illaha adeegga la barbardhigo qiimaha dhinac saddexaad ah. The Guardian-ka ka dhigi karaa guddiga yar haddii akhriste iyada oo ay yeerto oo ka dhigaysa iibsi.
macluumaad dheeraad ah.
superphone ugu dambeeyay undercuts tartanka qiimaha halka bixiya khibrad wanaagsan in ku dhow jid kasta oo macno leh. OnePlus The 7 Pro waa adag yahay ee ugu weyn ee weli yaxaas 6.67in screen QHD + AMOLED, kaas oo muran la'aan waa ninka ugu fiican on phone kasta. Waxaa waddaa heerka helid of 90Hz a - taas oo ka dhigaysa wax walba ka boggan iyada oo liiska jabinaya iyada oo kulan ku dhisneyd super - la 60Hz tartanka marka loo eego.
screen waa ku laayeen-to-ku laayeen jiho kasta oo aad, maqnaato wax loo calaanjin by noqtay haysata kooxda ay xafiiltamaan sida camera sawir ayaa u dhaqaaqay module ah baabuurta in booda out of sare ee telefoonka marka loo baahdo.
Speed ​​waa magaca ciyaarta. OnePlus The 7 Pro waa smartphone ugu dhaqsiyaha-dareen by miles. Qayb ka mid ah in uu yahay adag ee version fiican ee Android 9 Goobeed yeedhay OxygenOS, taas oo ah on-par leh Google ee pixels ah, oo kale ah waa hardware sare-of-the-line.
Waxay leedahay dambeeyay Qualcomm ee Snapdragon 855 processor, ugu yaraan 6GB ee RAM iyo 128GB of kaydinta. Laakiin kaydinta in sidoo kale ka dhakhso badan ay xafiiltamaan ee isticmaalaya caadiga cusub UFS3.0, iyo farqiga in isticmaalka maalin-ka-maalin waa u dareemi.
Xitaa scanner faraha in-bandhigay indhaha waa ugu fiican ganacsiga, ku garaacday in ka Huawei P30 Pro iyo tallaabadaas dareemayaal capacitive dhaqameed for xawaaraha.
Nidaamka camera xaafuun ku xafiiltamaan kulan dib isku ugu weyn 48MP a, a 16MP xagal aalladda ballaaran iyo camera Telefoto 8MP. Waxa aan ku garaaci karto Pro P30 ah, laakiin waxa ay kulan ama garaaca intiisa kale on faahfaahsan oo utility.
Nolosha Battery waa wanaagsan yahay, laakiin ma Huawei-garaaca. Waxaa Qarashka soomi la isticmaalayo nidaamka WarpCharge OnePlus ee, laakiin ma jirto xukun wireless, oo waa ceeb. Waa biyo u adkaysta ilaa xad, laakiin ma laha rating IP ah. Waxaa sidoo kale uu leeyahay taageero dual-sim inta badan suuqyada.
OnePlus The 7 Pro sidoo kale ku yimaado version 5G aad u, taas oo ah hal-SIM oo kaliya laakiin waa inay isku qiyaas, miisaanka iyo waxqabadka sida version 4G-kaliya oo waa la heli karaa si gaar ah uga soo EE UK laga bilaabo £ 170 oo leh 24-bilood £ qorshe 59 / bishii.
Waa maxay sababta aad u iibsato?
Shaashadda mushkilado, xawaaraha sheer iyo in-bandhigay scanner faraha, weheliso OxygenOS ku dhisneyd ee, sameeyaan hawlaha xitaa walise farxad. OnePlus weyn 7 Pro waa kan ugu wada hubaal stretch ah in la isticmaalo, laakiin waa qaadasho mudan in stretch ah
Buy haddii: aad rabto in aad waayo-aragnimo ugu fiican oo ugu dhaqsiyaha badan superphone
Ha iibsan haddii: aadan rabin in ay fidin sida phone weyn
dib u eegis Full: OnePlus 7 dib u eegis Pro: bahal buuxda si kasta
macruufka Best: Apple iPhone XS
kombaniga: £ 999 / $999
iPhone cusub Apple ayaa sidoo kale ugu yar waa isku darka ugu fiican ee awoodda, size, screen iyo camera.
iPhone ugu fiican ee ma aha ugu weyn ama ugu qaalisan. iPhone XS The isku daraa cajiib ah, wanaagsan-size screen 5.8in, waxqabadka jirka iyo top-uruursanayey svelte galay xirmo ugu rafcaanka ka Apple taariikhda.
ID Face Apple waa habka ugu wanaagsan ee wejiga aqoonsiga ee ganacsiga, nidaamka dual-camera ku saabsan dib waa u fiican, sida uu yahay qaab ka mid ah processor A12 Bionic iyo nidaamka navigation ee fasalka keentay tilmaam ee macruufka, taas oo uu bedelay button guriga ee iPhone ee horreeyey ee.
Waxa kale oo aad tahay qof in line muddo shan sano ah updates software, taas oo ay u badan tahay waa ugu yaraan labo ka badan brand kasta oo kale oo phone. iPhone XS waa rooti biraha iyo galaas, iyo yareyso doonaa sida tartanka marka hoos, laakiin dhinac ahama iyo dib galaas exude dareento raaxo ah ma isku aadiyo by telefoonada kale. Waxaa wax laga xumaado ugu rid doonaa kiis.
Khasaaraha ugu weyn waa kuu qiimihii, taas oo at £ 1,000 tahay waa weyn u badan tartanka, iyo nolosha batteriga, taas oo kaliya ayaa maamusha oo ku saabsan maalinta a of isticmaalka dhexdhexaad ah. iPhone XS waxay leedahay xukun wireless iyo taageero degdeg ah ku amraya via ah USB-C inay cable danabka, laakiin maraakiibta keliya xeedho gaabis ah in sanduuqa. Its qaab modem gacanta sidoo kale ma aha sida wanaagsan sida tartamaya, dhibtoonaya dheeraad ah si ay u sii xiriir shaqeeya 4G xogta goobaha ciriiriga, gaar ahaan Mate la barbar dhigo 20 Pro.
Haddii aad xiray in macruufka, ama aad rabto software update caymiska ugu dheer, markaas XS iPhone waa smartphone ugu fiican Apple aad ka iibsan kartaa (oo aan aad u fog ka dambeeya Mate ah 20 Pro guud), in ay isku darka of size mahad, camera, awood iyo dareenka raaxo.
Buy haddii: aad rabto in aad iPhone ugu fiican
Ha iibsan haddii: aadan rabin in lacag dhan £ 999 ama rabto in aad isticmaasho Android
dib u eegis Full: dib u eegis Apple iPhone XS: laba talaabo weeraryahanka, hal talaabo dib
Best yar Android: Samsung Galaxy S10
kombaniga: £ 799 / $899
weyn A, screen qurux badan in phone yar, S10 Galaxy waa kaalinta macaan line smartphone flagship Samsung ee.
Haddii aad rabto in aad ka-barta macaan dhexeeya weyn a, screen cajiib ah oo size phone yar yar in ay u fududahay in ay xamili iyo taam jeebka, taasi S10 Galaxy.
6.1in QHD + AMOLED screen la uruursanayey ah oo god-feer yar ee xaq u top waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee suuqa iyo waa ku filan si ay u sameeyaan weyn ugu of Chine iyo movies eegi weyn.
Small bezels dhan samaynaysaa wareega telefoonka quruxsan is haysta marka la barbar dhigo kooxda ay xafiiltamaan, iyo waxa aad ka light. Waxaa weli dhalooyinka iyo birta rooti, taas oo macnaheedu yahay in aad u baahan tahay kiis si looga hortago inuu dhaco.
The shidma faraha ultrasonic Jaha hoos bandhigay si fiican u shaqeeyo, inkasta oo ay mar dambe ugu dhaqsiyaha badan ee suuqa.
cusub ee software One UI Samsung ee, ku salaysan Android 9 goobeed, waa u boodboodi weyn ee samaynta phone weyn u fududahay in la isticmaalo, wax aad leedahay gelinaya in la taabto xagga hoose ee shaashadda iyo macluumaad dhinaca hogaanka. Samsung waxa kale oo uu ku siinayaa doorashada ee furayaasha navigation dhaqanka ama baaqa dadban.
Waa in aad ku dhawaad ​​saddex sano oo taageero ah software ka Samsung, inkastoo shirkadda badanaa waa u gaabiyaa samatabbixin weyn updates version Android.
The camera xaafuun gadaal waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oggolaadaan in aad Mozilla ka 0.5 iyada oo 2x, iyo in 10x zoom ah hybrid. Waxa aan ku garaacday doonaa Huawei P30 Pro, laakiin waxa ay kor u xajiya, oo hadhay. camera sawir The pokes si toos ah inkastoo shaashadda oo waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee suuqa.
Performance waa wanaagsan yahay, laakiin nolosha batteriga waa S10 ee ka mid daciifnimo. Waxa uu socon doonaa maalin isticmaalka laakiin aan wax badan ka badan. Waxaa jira cable iyo xukun degdeg ah wireless si loo kordhiyo inta lagu guda jiro maalinta iyo wireless feature share xoogga labada jirsado phone galay xeedho ah ad hoc-wireless qalabka kale.
weyn ayaa, screen qurux badan in phone a eego yar waa barta ugu weyn ee lagu iibiyo, laakiin camera wanaagsan, waxqabadka iyo looks caawimaad aad
Buy haddii: aad rabto in aad dheelitirka ugu fiican ee shaashadda weyn iyo phone yar
Ha iibsan haddii: aad rabto in aad nolosha batteriga cajiib ah
dib u eegis Full: dib u eegis Samsung Galaxy S10: kaalinta macaan
camera Best: Huawei P30 Pro
kombaniga: £ 899
The Huawei P30 Pro wuxuu leeyahay weyn, screen qurux badan, nolosha batari dheer iyo camera kulan-beddelo ah qaab low-light gaar ah, 5x zoom indhaha iyo ilaa 50x zoom digital.
camera ugu wanaagsan on phone a waa Huawei ee P30 Pro by margin qaar ka mid ah. No phone kale bixisaa sida isku dhafan oo dhamaystiran sida camera cusub Bawdada Leica Huawei ee.
The 20MP 0.6x camera xagal aalladda, iriddu waa weyn xiiso leh, ee camera ugu weyn 1X 40MP waa heer sare ah oo uu ku biiray by 5x periscopic camera zoom indhaha cusub oo aad u helo dhow smartphone kasta oo kale oo. Haddii shan jeer weyneeyey uusan ku filnayn, jidka oo dhan waxaa ka wanaagsan 10x zoom hybrid on top ka dibna zoom a digital ilaa 50x. A 3D qoto-Satlaytaka waqti-of-duulimaadka wareeg shidma baxay modules ku yaala gadaasha dambe.
heerarka cajiib ah zoom gees u, ee P30 Pro kale oo uu leeyahay qaab low-light kulan-beddelidda in dhakhso jirsado habeenkii maalin oo aan haysan in ay sugto dhowr ilbiriqsi ee qabsaday.
Inta kale ee phone waa mid fiican sidoo kale la cajiib ah fursadaha midabka. The FHD 6.47in waaweyn + OLED waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan, la uruursanayey yar oo hogaanka ay ku jiraan camera sawir iyo bezels caato ah-wareega oo dhan. The qalooca geesaha sii width ee telefoonka si ballaaran a 73.4mm cidhiidhi ah, waxay la micno ah weli xad maamuli karo oo si fudud loo mushtarka maalin-ka-maalin, gaar ahaan marka la barbar dhigo OnePlus ah 7 Pro ama iPhone XS Max.
The ku-screen shidma faraha indhaha waa labaad oo kaliya in ay OnePlus ah 7 ee Pro. top-uruursanayey Huawei ee Kirin 980 processor, 8GB ee RAM iyo 128GB of kaydinta, waxay bixisaa qaab weyn iyo batari in uu socon doonaa ilaa laba maalmood. Plus eedeeyo ugu dhaqsiyaha badan waxayna leedahay xukun wireless iyo awood qaybsiga.
Huawei ee dib u habaynta Android 9 goobeed, EMUI 9.1, waa heer sare customizable iyo leedahay badan oo sifooyinka laakiin waxaa laga yaabaa in aanay noqon in qof walba dhadhankii. Huawei waxa haysta cunaqabatayn ka Maraykanka oo qayb ka ah -US China dagaal ganacsiga, taas oo ka dhigaysa in ay mustaqbalka aan la hubin. Pro P30 The waa in ay sii wadaan si ay u helaan updates sida caadiga ah, Si kastaba ha ahaatee.
camera waxaa kulan-beddelidda in macno leh, siyaabo aan Sheekadaas ka buuxo, halka inta kale ee telefoonka waa heer sare
Buy haddii: aad rabto in aad camera ugu wanaagsan on phone weyn
Ha iibsan haddii: aad rabto in aad telefoon ka yar ama ka walwalsan ah oo ku saabsan Go'doominta Maraykanka ee Huawei
dib u eegis Full: Huawei P30 dib u eegis Pro: kulan-beddelo camera, nolosha batteriga hugaaminaya
qiimaha Best: OnePlus 6T
kombaniga: £ 499 / $549
Si fudud u gelin, at £ 500 aad leedahay si aad wax dheeraad ah ku qaataan qadar badan si wanaagsan u 6T OnePlus ah.
Haddii aad rabto in aad u weyn a, phone sare ee Creech, laakiin ma doonayaan in lacag dhan £ 900, markaas 6T OnePlus waa mid ka mid ah si ay u iibsadaan.
Waxay leedahay weyn a iyo 6.41in qurux HD full screen OLED, a carmallada yar peak-sida uruursanayey for camera sawir ah, caato bezels wareegsan oo dhan, iyo dhismaha biraha iyo muraayad wanaagsan-dareen tallaabadaas tayada dadka kale ugu.
Waxay leedahay processor a top-of-the-line, 6GB ee RAM, 128GB of kaydinta iyo nolosha batteriga 30-saac aad. Khibradda Android on OnePlus ah, OS ogsijiin, waa labaad oo kaliya in ay Google ee Pixel ah; waa waxashnimo ah oo degdeg ah oo la simi hawlgal. OnePlus damaanado laba sano of updates software iyo sanad dheeraad ah updates ammaanka laga bilaabo taariikhda loo sii daayo ee telefoonka ee.
Waxaa xitaa uu leeyahay scanner ah faraha goynta-ku laayeen in-soo bandhigay, taas oo ku dhawaad ​​sida ugu fiican ee ugu fiican dareemayaal capacitive heegan ah, iyo taageero dual-sim for adigoo laba xiriir network telefoonka gacanta waqti isku mid ah.
khasaaraha waxay ku fiican yihiin a, laakiin ma weyn, camera in aanu ilaa xad aan islahayn tartanka halkan, ma rating iska caabin biyo rasmi ah iyo ma xukun wireless.
screen A weyn iyo weyn la bezels yar, software aad u fiican iyo waxqabadka, in-bandhigay scanner faraha iyo wanaag-laakiin-ma-weyn camera macnaheedu aad u leeyihiin in ay si weyn u dheeraad ah ku qaataan si aad u hesho telefoonka ka fiican yahay this.
Buy haddii: aad rabto in aad telefoon u oolli-jirin, laakiin ma doonayaan in ay ku qaataan wax ka badan £ 500
Ha iibsan haddii: aad rabto in aad camera fiican
dib u eegis Full: dib u eegis OnePlus 6T: aad leedahay lahaa in double qaataan ka khayr badan si ay u helaan
Casriga ah waxaa lagu qiimeeyo by size screen qiyaasay on dadab ee inches. Tirada weyn weyn ee telefoonka, laakiin telefoonada kala duwan u isticmaalaan saamiyada kala duwan ee height in width.
Sidee u fududahay waa in la riixo hoos timaado in width oo ka mid ah phone oo miisaankiisuna. cidhiidhi iyo fududee waa, sahlan waa in ay qabtay in hal gacan iyo ka yar tahay ay tahay in aad u da'a.
Waa maxay caadi yeedhay processor ee telefoonka ah run ahaantii waa a a-chip nidaam-on-isku processor, garaafyada iyo hababka kale ee lagama maarmaanka ah mid ku.
Guud ahaan processor cusub ah oo awood badan iyo batari ku ool ah waxa ay noqon doontaa. Samsung, Huawei iyo Apple dhigi iyaga u gaar ah, halka Qualcomm waa shirkadda ugu wayn inay magac kale dhamaadka sare, ay Snapdragon kala duwan 8-taxanaha hogaanka.
RAM The (xusuusta) waxaa halkaas apps iyo geedi socodka aad ku kaydsan yihiin marka la isticmaalo, sidaas oo kale ayaa telefoonka aad wax dheeraad ah leeyahay si fiican, ilaa hal dhibic.
Android u baahan RAM badan macruufka, sidaas darteed waa adag tahay in si toos ah oo lala bar bar. Laakiin Android ugu yaraan 4GB ee RAM waxaa hadda lagu talinayaa.
Kala duwan oo ka soo xusuusta, kaydinta waa meesha wax kasta waxa lagu kaydiyaa on telefoonka, oo ay ku jiraan apps iyo warbaahinta. Iyadoo a telefoonada yar ayaa ay kaydinta ballaarin karaa kaararka microSD, ugu ma karo.
Taasi hab waa in aad ujeedadoodu tahay 64GB ee kaydinta ugu yaraan, laakiin si ka badan haddii aad rabto in aad saami dukaanka of photos. adeegyada Cloud sida Spotify ama Photos Google ayaa kaa caawin kara iska iibiso aad music, sawiro ama videos in internetka.
Aamin Anonymous ILAALI aad telefoon waa muhiim, taas oo ka dhigaysa updates software muhiim u ah cayayaanka jaan iyo godad ammaanka, iyo sidoo kale intaa ku daray qaababka cusub iyo hagaajinta waxyaabaha sida nolosha batteriga iyo kamarad.
Telefoonada oo dhan ma wada aqbali updates joogto ah. taageero Apple ee telefoonada ka weyn waa ugu fiican ee ganacsi ee ku xeeran 5 sano, raacay by Samsung iyo Google ayaa saddex sano, labadaba laga bilaabo marka telefoonka la sii daayay – ma marka aad iibsato.
Nolosha Battery si wayn kala duwan qalabka, iyo “oo dhan-maalin batari” inta badan macnaheedu ma aha 24 saacadaha u dhexeeya eedeeyay. Qaar ka mid ah oo ku filan muddo dheer laga yaabaa in aan la soo dhaafay, gaar ahaan haddii aad tahay qof ka soo fiidkii.
Nolosha Battery uu ka sii daro sida batari da'doodu aad u, si batteriga laba maalmood ah oo ay u badan tahay hubin doona telefoonka ugu yaraan qaadataa maalintii laba sano ka dib.
Kamaradaha yihiin dagaal ee hadda ka dhexeeya ciyaaryahano waa weyn, laakiin xadad u dhexeeya iyaga waxaa slimming.
Inta badan la isticmaalo sawir xisaabeed in isku daraa hardware la algorithms software sare, caadi ahaan jidaynayey kamaradaha badan in la isu geeyo si ay u sameeyaan mid ka mid image.
Sida sida software camera dhigayaa sida farqiga u badan sida hardware ah, oo waa mid ka mid ah meelaha yar in si dhab ah hagaajinaysaa muddo la updates.
nidaamka Multi-camera inta badan bixiyaan more, zooms sida waxtar leh sida, hababka sawirka iyo waxqabadka low-light wanaagsan, laakiinse kama dhan abuuray si siman. Waxaa sidoo kale jira 3D kamaradaha, kaas oo lagu ogaan karaa wajiga iyo tabaha kale oo xiiso leh.
Tirada megapixels (Xildhibaan) waxa kale oo kala duwan. Lahaanshaha more MP khasab ma aha simanyihiin muuqaal wanaagsan, laakiin kamaradaha smartphone casriga ah isu geeyo pixels badan si loo hagaajiyo tayada image saara darbo 12MP ka dareemayaal 48MP, tusaale ahaan.
Waxyaabaha kale ee ah in la tixgeliyo
xukun wireless: haboon, laakiin gaabis badan via cable iyo sida caadiga ah suuf ku amraya uusan u imaanin in sanduuqa
cimri dherer: guud ahaan galaas on hore iyo xagga dambe ee telefoonka ka dhigaysa in ay ka jilicsan
qiimaha u gadista: iPhone ka fiican tahay dadka kale ugu qabtaan oo ay qiimaha
OLED kasoo horjeeddo LCD: screens OLED dhaadheer si ay iftiin u gaar ah leeyihiin kiiyoo badan qoto dheer iyo midabo more firfircoon, halka screens LCD waa ka jaban
kaalinta labaad ilaa
Kuwani waa telefoonada wanaagsan weli ku kacaya gadashada haddii mid ka mid ahaa hogaanka afar casriga haboon biilka.
Apple iPhone Janumet
kombaniga: £ 749 / $749
Apple ayaa wax yar ka jaban iPhone Janumet dalabyo badan oo muuqaalada XS iPhone. Waxaa sidoo kale wuxuu leeyahay nolosha batteriga ka fiican, laakiin camera xun, a wax yar ka weyn, laakiin screen ka xun oo laga sameeyey aluminium iyo dhalooyinka, halkii ahama, badiyay ay u dareento raaxo iyo aqoonta in ay Apple ugu fiican ka dhigi kara.
The looks iPhone Janumet cajiib ah in cas, laakiin ma ahan raqiis ah by stretch kasta oo caasinimada, ujecel badan ama ka badan sida telefoonada flagship run ka tartamaya. XS iPhone weli mid ka mid ah si ay u iibsadaan haddii aad rabto in aad iPhone ah, laakiin haddii aad rabto in aad si loo badbaadiyo lacag, beddelato Android.
dib u eegis Full: dib u eegis iPhone Janumet: batari Apple ayaa boqorkii jaban
kombaniga: £ 1.099 / $1,099
Haddii ay noqoto in aad leedahay iPhone ah oo waa in ay lahaato shaashad weyn, markaas XS iPhone Max waa haddii aad doorbidayso oo kaliya. Laakiin waa ka sii qaali ah oo waaweyn oo culus, taas oo quruxsan adag tahay in ay la tacaalaan maalin-ka-maalin, taasoo la micno ah yar iPhone XS waa ikhtiyaarka ugu fiican.
dib u eegis Full: dib u eegis iPhone XS Max: smartphone supersized Apple ee
kombaniga: £ 899 / $999
version The weyn ee S10 Galaxy oo la soo bandhigay QHD 6.4in + leeyahay screen ugu wanaagsan ee la heli karo on qalab kasta oo. The uruursanayey dalool-feer gadood-qaabeeya waa sheeko, oo ay ku jiraan laba kamaradaha sawir wanaagsan. The camera gadaal xaafuun waa wanaagsan yahay, laakiin ma jaan a on P30 Huawei ee Pro. Performance waa wanaagsan yahay, sidaa darteed waa software ah, laakiin nolosha batteriga wax yar niyadjab leh ugu fiican marka loo eego.
dib u eegis Full: Samsung Galaxy S10 + dib u eegis: shaashad si fudud u cajiib ah
Samsung ee Galaxy Note 9 dalabyo kala duwan xoogaa wax a, nolosha batari dheer, screen weyn iyo stylus dhan-muhiim S Pen. Haddii aad raadineyso weeyna quwad wax soo saarka ah, Fiiro gaar ah u 9 waa. Laakiin waxaa kale oo ay si wayn qaabka uu wax yar ku qorin.
dib u eegis Full: Samsung Galaxy Note 9 dib u eegis: phone yeela-walba ku
kombaniga: £ 899,99
Mate The 20 Pro wuxuu leeyahay waa weyn ee, 6.39in soo jiidasho screen QHD +, jirka svelte, nolosha batari dheer iyo waxqabadka weyn in phone sare oo ka mid ah ka dhigay 2018. Si kastaba ha ahaatee, nidaamka fiican camera xaafuun la 3x zoom indhaha ayaa isna jawaab by Huawei ee cusub P30 Pro, taas oo uu leeyahay camera Bawdada Leica la 5x zoom indhaha. Waxaa xusid mudan raadinayaa heshiisyo, gaar ahaan haddii aad rabto in aad 3D doorasho wejiga Unlock ah.
dib u eegis Full: Huawei Mate 20 dib u eegis Pro: cajiib goynta-ku laayeen
kombaniga: £ 500
Huawei ee brand Honor ayaa magac isu-qiimaha gooyay, laakiin wanaagsan telefoonada. View20 waa telefoonka ugu wanaagsan ee uu sameeyay iyo waxa arrinkaas qiimaha at kaliya £ 500.
Waxay leedahay a Huawei Kirin top-of-the-line 980 processor (sida aan ka arki Mate ah 20 Pro), wanaagsan-raadinta FHD 6.4in + screen LCD a, badan oo lagu keydiyo, 6 ama 8GB ee RAM, scanner a super-deg deg ah faraha ku yaala gadaasha dambe oo waxa uu xitaa weli godka headphone a. Tilmaamo xulkooda u yihiin uruursanayey dalool-feer ee shaashadda, kaas oo ah pokes camera sawir 25MP fiican, iyo camera a 48MP run ahaantii weyn ku yaala gadaasha dambe.
xukun Fast, nolosha batari dheer, in-gacanta dareenka weyn iyo hannaanka banjoog ah light-ka tarjumaysa V-qaabeeya ee muraayadda dib wareega baxay xogta muhiimka ah. Honor ee Magic UI 2, ku salaysan Android 9 goobeed, ma aha arrin u fiican sida OxygenOS OnePlus ee, laakiin ugu yaraan aad ka heli laba ilaa saddex sano oo updates.
Out of labada £ 500 telefoonada top-dhamaadka, iibsan View20 Honor haddii aad rabto in aad camera ka fiican; iibsan 6T OnePlus haddii aad rabto in aad waayo-aragnimo user wanaagsan iyo software.
dib u eegis Full: dib u eegis Honor View20: phone top at kharashka XS iPhone nus
kombaniga: £ 739 / $799
Pixel The 3 waa dhan oo ku saabsan camera iyo software Google. screen OLED 5.5in waa yar by heerarka 2019, waxaana uu bezels waaweyn ee sare iyo ka hoose, taas oo ka dhigi telefoonka ka weyn u baahan tahay si ay u noqon oo aan siin eegno qorin.
Laakiin camera gadaal hal fantastic Google, software aad u fiican iyo updates si degdeg ah ay ka qiimo gadashada galay. Performance waa wanaagsan tahay, laakiin nolosha batteriga waa yara daciif ah. Iibso haddii aad rabto in aad telefoon yar iyo Galaxy Samsung ee S10 ma waxaa loogu talagalay adiga.
dib u eegis Full: Google Pixel 3 dib u eegis: kor u bar ah ee waayo-aragnimo ah Android
kombaniga: £ 869 / $899
Google Pixel weyn 3 XL uu leeyahay wax walba oo ka dhigaysa Pixel ah 3 phone aad u weyn, laakiin waa weyn la uruursanayey weyn sare ee shaashadda. Waa dhib badan tahay in ay la tacaalaan ka badan ay walaalaha yar yar iyo waa ka qaalisan, laakiin wuxuu leeyahay nolosha batteriga wax yar ka fiican. Haddii aad jeclaan Pixel ah 3 laakiin waxa ay doonayaan shaashad weyn, tani waa phone aad u, laakiin on dhan version yar waa qalab fiican inta badan dadka. Mate The 20 Pro waa ka wanaagsan phone weyn-screen meel wareegsan oo dhan.
dib u eegis Full: Google Pixel 3 dib u eegis XL: weyn weli waa qurux
kombaniga: £ 499
Xiaomi ee telefoonka slider dalabyo ugu horeysay in ka badan inta badan lacag, la Details horyaalka Ingariiska, waayo, 2018 si toos ah ula OnePlus 6T iyo Honor View20 tartamaya. Waxay qaadataa hab oo kala duwan si ay dhibaatada meesha laga saaray camera sawir ee design dhan-screen ah, qarinaya dambeeya shaashadda on qaybta slide-baxay.
Good, laakiin arrin weyn oo ah sidii ay tartan, phone this weyn yahay dib miisaan culus iyo waayo-aragnimo software ah in kaliya ma aha sida wanaagsan, inkastoo fursado navigation tilmaam adag.
dib u eegis Full: Xiaomi Mi Mix 3 dib u eegis: slider novel ugu dambeyntii ku dhufan UK
Nokia 8 Sirocco - software Good laakiin design celcelis ahaan iyo camera - £ 600
Razer Phone 2 – Ciyaaraha bahal phone in dhacaa hoos waxqabadka camera - £ 500
Sony Xperia XZ3 - Good, laakiin phone ma weyn in seego sumadda - £ 699
LG G7 - qurux design iyo software in aan sida ugu fiican ee ay xafiiltamaan - £ 375
Best earbuds wireless run: AirPods, Samsung, Jabra iyo Anker marka la barbar dhigo oo kaalinta
← Features caan ah iyo Nidaamka Isticmaalka of Data EaseUS Recovery Wizard Free Honor 20 Review Pro →